Terms And Conditions - Kurasikirwa nei shure vhiki cheap car insurance zvose - 10% kusvika £ 100 |
Terms And Conditions – Kurasikirwa nei shure vhiki cheap car insurance zvose - 10% kusvika £ 100
Kukwidziridzwa Izvi zvichava tichishingaira pakati rechi19 – 25fung January 2017 (GMT).
Chete Profit uye Kurasikirwa (P&L) mumwaka kukwidziridzwa nguva achaverenga vakananga zvinodiwa kuti kurasikirwa shure.
Kurasikirwa Back vachamutswa paakavapa maererano mambure kurasikirwa (mari chaiyo nekufirwa) zvose mitambo slots.
Vatambi kunge yakaiswa £ 10 ari kukwidziridzwa nguva kuti qualify.In nezvechiitiko wako mambure P&L ave dzakava pamusoro £ 10 kurasikirwa, muchagamuchira kwakasimukira chaizvo akaverenga panguva 10% kufirwa dzenyu mitambo slots kusvikira vaifanira pakati £ 100.
Maximum nekufirwa musana yakawandisa £ 100 bhonasi mari.
Standard bhonasi wagering zvinodiwa 30x inouya mari kushandisa pamberi bonuses kana tsamba winnings inogona kutorwa.
Bhonasi mari pakupfuwa kusimudzirwa ichi, anogona chete kushandiswa kutamba yedu slots games.Wagers musi Blackjack uye Roulette regai kubatsira zvinoderedza pamusoro wagering chinodiwa bhonasi zviyero.
Bonuses rinogona kutora 3 kushanda mazuva kubva kumagumo kukwidziridzwa kuti dzinonzi kuchikwama chenyu.
Vatambi tinoyeuchidzwa kuti chete bhonasi anogona kuva vanoshingaira chero imwe nguva, Ndapota enda “Nhoroondo wangu” chikamu kuona bhonasi yose tungamidzana yako.
General Terms uye Conditions kushandisa.
20% Win vaonekere Daily Cleo Plus dingindira kusvikira £ 200
Terms uye Conditions pamusoro Win wedzera Thursday